Soomaalida oo kaalinta 5aad ka galay Qaxootiga Caalamka |
Maanta oo ku beegan maalinta Qaxootiga ayaa warbixinta Qaramada midoobay soo saartay ku sheegtay in dalka Soomaaliya uu kaalinta 5aad uga jiro wadamada ay kasoo qaxeen qaxootiga ugu badan caalamka.
Warbixinta Qaramada Midoobay soo saartay Salaasadii shalay ayaa lagu sheegay in shanta wadan ee qaxootiga ugu badan ka yimaadaan ayaa kala ah;
Inkastoo ay dalalka reer Galbeedka xiligan cabsi weyn ka qabaan qaxootiga faraha badan ee dalalkooda imaanaya, ayaa hadana warbixinta lagu sheegay in inta badan qaxootiga ay ku sugan yihiin dalalka jaarka la ah wadamada ay kasoo qaxeen.
Tirakoobka Sanadkii lasoo dhaafay ee 2017 ayaa sheegaya in Barakacayaasha caalamka guud ahaan ay gaarayaan 68.5 milyan oo qof, kuwaasi oo 25.4 milyan kamid ah ay yihiin qaxootiga u haajiray dalalka ka baxsan wadankooda.
Qaxootiga diiwaangashan ee Soomaalida ah ayaa lagu sheegay inay gaarayaan 986,400 qof, kuwaasi oo intooda badan ku nool dalalka Soomaaliya jaarka la ah ee Kenya, Itoobiya iyo Yemen oo ay hada dagaalo ka socdaan.